Ubumfama bombhalo - andinanto yokugqoka kwakhona
Isisombululo ngokusweleka kwempahla
"Andinanto yokugqoka kwakhona!" Ngubani ongayazi esi sigwebo esivela emlonyeni wowesifazane ofana naye yonke imihla phambi kwesigcino sakhe esigcwele kwaye engazi ukuba ugqoke? Cacisa imeko yobumfama obunxibe. Kodwa ... uncedo lusondela!
Ubumfama bombhalo - ukhetho lukhuni
"Ekuseni!" Kucaciswa kwi-radiyo "Namhlanje ngumhla okhanyayo. Iintaka zihamba nge-twitter. Likufuphi newashi le-07.00 kwaye ezinye ukunyuka kwamandulo sele ziqhutyelwe ukusebenza. "
Ubumfama bombhalo - andinanto yokugqoka!
Uhlala elele ngoku, emele phambi kwengubo yakhe yokugqoka kwaye akayazi into yokugqoka: Omnye wabasetyhini abaninzi beli hlabathi abanalo kakhulu ukugqoka kwikhemitha engakwaziyo ukuba ayenxibe ,
Ngaloo mini, kulo suku olubalulekileyo, xa intloko yesebe iya kumbuza intetho phambi kwabasebenzi abadibeneyo, akafumananga oko akufunayo. Uqwalasela iintlobo ezahlukeneyo. Iimfumba kunye neengubo zixotyiwe ethempelini kwaye zizama.
Ixesha liphela kwaye akafumananga nantoni na eya kumkholisa kulo suku olubalulekileyo. Ekugqibeleni, kwakhona kwakhona i-sweat sweat ejwayelekile kwaye idla ngokugqithisa. Ngubani ongayazi oku?
Yintoni u bumfama?
Ubumfama bobugcisa bubonakala ngokugqithisekileyo kwabasetyhini, nabani na ukhetho oluninzi luwela kwiminqweno yamacandelo amaninzi ngemini. Kwilahleko, abafazi bemi phambi kwekhamera kwaye bengazi nje ukuba yintoni ukugqoka. Ekubeni abafazi baxhomekeka ngokuvakalelwa kwabo, kodwa ixesha elininzi libaxelela ukuba batyebile, kunzima kakhulu ukufumana okulungileyo.
Ingaba isini isini sinokukunceda apha?
Unokukunceda njani? Ngamafutshane, "HHAYI". Ukuze kungabikho umngcipheko kwiingxabano ezinkulu, kuya kuba ngcono ukugodla kwiimeko ezinjalo. Kwaye amazwi anothando kakhulu akanakunceda apha. Yonke into isetyenziswe ngokuthe ngqo kunokuba enye ingathetha. Ngenxa yokuba uthi "Ndicinga ukuba kukufanele", uyaphendula "ukuba usoloko uthi" kwaye uthi "Andiyithandi loo nto" uya kugqiba "ucinga ukuba ndikhuluphele?"
Abafazi abangacatshangelwayo kufuneka bajonge nje ingubo ngomhla olandelayo ebusuku.
Ubumfama obuthathaka bukhohlisiwe
Inzuzo kukuba unengqondo ecacileyo ngokungabikho kwexesha lokunyanzeliswa ukuba ucinge malunga nokuba yiyiphi into efanelekileyo kwaye igcine ixesha elixabisekileyo ekuseni. Ngoko uqala ngoko kwakhona kwimeko efanelekileyo ngosuku.
Enye indlela yokuyilombulula "ingxaki" nje ukukrazula ikhabethe. Uphononongo lubonisa ukuba kuphela i-20% yeengubo kwi-closet empeleni igqoke rhoqo.
Inketho yesithathu yinkqubo endala ebizwa ngokuthi "vala amehlo akho". Yenza nje amehlo akho phezulu kwaye wehla ngomnwe wakho phambi kwesigqoko seengubo uze uhambe ngethuba kwelinye inxalenye. Kwaye oko kukutsala, ngaphandle kokucinga ngako.
Ngaloo ndlela kuphela iinyembezi zinokuphuma kunye nokuwa phambi kwe-wardrobe kunye nesilumkiso esithi "andinanto yokugqoka!" Kwinqanaba elithile lugwenywe.
Yoga iimpahla kunye nezixhobo